चियावालीलाई भा’इरल बनाउने प्लानिङ थियो ? वि’वाद पछि गजेन्द्रले खोले सबै कुरा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित) – SUDUR MEDIA
चियावालीलाई भा’इरल बनाउने प्लानिङ थियो ? वि’वाद पछि गजेन्द्रले खोले सबै कुरा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
April 1, 2021 April 1, 2021 AdminLeaveaComment on चियावालीलाई भा’इरल बनाउने प्लानिङ थियो ? वि’वाद पछि गजेन्द्रले खोले सबै कुरा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)
अहिले चियावालीको उपनामले सामाजिक संजालमा निकै नै भा’इरल बनेकी नुवाकोटकी सृष्टि तामाङ जो आफ्नो दुई वर्षको आफ्नो दुधे बालकलाई आफ्नो पिठ्युँमा बोकेर रातको तीन बजेदेखि चिया बनाउँदै र बेच्दै आउनुभएको छ। उहाँको संघर्षको यो दृश्यलाई गोदावरीका एकजना फोटो पत्रकार गजेन्द्र राज नेम्बाङले सामाजिक संजाल मार्फत सेयर गर्नुभयो र यो दृश्य यतिबेला संसारभर भाइरल बन्न पुग्यो ।
सामान्य व्यापार गरेर चिया बेच्दै गरेको मान्छे यस्तो चर्चा पाउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ,’ एकदमै खुसी लागिरहेको छ,यस्तो हुन्छ भनेर सपना पनि देख्या थिइन। यत्रो सबै जना दाजुभाइ,दिदीबहिनी,आमाबुबाहरूले मन पराइदिनुहुन्छ भनेर खासै आशा पनि गरेको थिइन। यति धेरै माया गरिदिनुभएको छ।उहाँहरू सबैलाई मनदेखी नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ‘
बिशेषत: लकडाउनको कारणले उनीहरूबीच बाँच्ने उपाय खोजी गर्ने क्रममा टाढिने अवस्था आएको भएतापनी यसरी जिम्मेवारविहीन बन्नु हुँदैन थियो एउटा श्रीमान हुनुको नाताले।जतिसुकै दुख संघर्ष गरेतापनि साथमै रहेर गर्नुभएको भए मलाई यति चोट पर्दैनथियो । उनले बताइन् ।
म कलाकार भएँ भनेर बुवाको गु,नासो थियो । मृ’त्यु हुने दिन म सँग नबोली जानु भयो मैले कैले खुशी दिनै सकिन ! हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
झापामा १८ बर्षे युवतीको रहस्यमय मृ*त्यु, केटाहरु कोठामा जहिले आउने गरेको सोहि घरमा बस्ने अर्को भाडावालाको खुलासा ! हे’र्नुहोस् (भिडियो सहित)